Hebei ထုတ်ပိုး Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Hebei Co. , Ltd မှထုတ်ပိုး ထုပ်ပိုးမှတဦးတည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်တရုတ် Hebei ပြည်နယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုးအိတ်များပေးသွင်းခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက်မှုဇုန်ထုတ်ပိုးအိတ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအိတ်များအတွက်တရုတ်၏မြောက်ဘက်တွင်အကြီးဆုံးဖြန့်ဖြူးများ၏တဦးတည်း, စိုက်ပျိုးရေး, တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်သတ္တုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် အမြောက်အများကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စူပါမားကက်, ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တ, နှင့်ဝယ်လက်လိုချင်တာတွေထုပ်ပိုးဖို့ wineshops နေ့စဉ်ထုတ်ပိုးအိတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆည်းကပ်ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ခရိုင်ကနေ clients များနှင့်အတူဖော်ရွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့လုံ့လဝိရိယနှင့်ညီညွတ်န်ထမ်းများ, စျေးပေါပစ္စည်းများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဒဏ်ငွေထုတ်လုပ်သူ, အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကုန်ပစ္စည်းအဘို့သင့်ဖြစ်နိုင်သောလိုအပ်ချက်များကိုမဆိုတွေ့ဆုံရန်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားကြသည်။
ကျနော်တို့ကြင်နာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများနှင့်အပြည့်အဝကူညီနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏ယုံကြည်မှုကိုပြန်ဆပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတရုတ်နိုင်ငံတွင် Hebei ပြည်နယ်၏ Shijiazhuang စီးတီး၌တည်ရှိ၏။ Hebei တရုတ်မြောက်ဘက်၏ Mid-အနောက်ဘက်အနီးရှိပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Shijiazhuang င်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Tianjin (တရုတ်၏မြောက်ဘက်တစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့) မှ 1200 ကီလိုမီတာရှန်ဟိုင်း (တရုတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးမြို့) မှ, 400 ခန့်ကီလိုမီတာကွာဘေဂျင်း (PRC ၏မြို့တော်) မှဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, 400 ကီလိုမီတာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအများစုကဤမြို့ကိုနီးစပ်သူဖြစ်ကြသည်။
မစ္စတာ Xie လီ / အထွေထွေမန်နေဂျာ
Tel ။ + 86-311-8788 7780 အဘယ်သူမျှမ .:; အဘယ်သူမျှမဖက်စ် .: + 86-311-8788 7785
E-mail ကို: info@hebei-packaging.com
နေရပ်လိပ်စာ: No.199, ဆင်ဟွာလမ်း, Shijiazhuang, Hebei, တရုတ်။